अक्टुबरमा होक्काइडो मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
शरद beautifulतुमा सुन्दर परिदृश्य दृश्यमा पहेलो लार्च रूख। अक्टुबर २,, २०१ B Biei, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
जापान मा अक्टूबर! शरद पातहरू पहाडी क्षेत्रबाट सुरु हुन्छ! >
यस पृष्ठमा, म अक्टोबरमा होक्काइडोको मौसम वर्णन गर्दछु। यस अवधिमा होक्काइडो शरद inतुमा छ। अक्टुबरको मध्यदेखि सप्पोरो जस्ता शहरहरूमा शरद पातहरू सुन्दर छन्। जे होस्, यो बिहान र बेलुका चिसो छ, त्यसैले कृपया तपाइँको जाडोका लुगालाई सूटकेसमा राख्नुहोस्।
अक्टूबरमा टोकियो र ओसाकाको मौसममा लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
अक्टूबरमा होक्काइडो बारेमा प्रश्नोत्तर
अक्टुबरमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
अक्टोबरको सुरूमा होक्काइडो मौसम
अक्टुबरको मध्यमा होक्काइडो मौसम
अक्टोबरको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा अक्टोबरमा हिउँ पर्दछ?
हिउँ डाइसेट्सुजान जस्ता पहाडी क्षेत्रहरूमा पर्दछ। सप्पोरो जस्ता मैदानहरूमा पनि, कहिलेकाहीं अक्टुबरको अन्तमा पहिलो हिउँ पर्दा यस्तो अवसरहरू हुन्छन्। यद्यपि अक्टुबर मूलतः मैदानी मैदानमा शरद seasonतु हो।
के अक्टुबरमा होक्काइडोमा फूलहरू फुलिरहेका छन्?
फूल फुल्ने मौसम बितिसकेको छ, तर अक्टोबरको बीचमा तपाईं केही फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं दूरीमा हिउँ पर्ने पहाडहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
अक्टूबरमा होक्काइडो कत्तिको चिसो छ?
होक्काइडो अक्टुबरमा छोटो गिरावट हो। यद्यपि अक्टोबरको पछिल्लो बिहान र बेलुका तापक्रम around डिग्री सेल्सियसमा झर्नेछ र लामो जाडो नजिक आउँदैछ।
अक्टूबरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ?
पतनका वस्त्रहरू अक्टुबरको पहिलो आधामा तयार गर्नुपर्दछ, तर म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि अक्टोबरको पछिल्लो भागमा पनि कोट ल्याउनुहोस्। जापानमा शरद clothesतु र जाडोको कपडाको बारेमा कृपया निम्न लेखहरूमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
अक्टूबर मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: अक्टूबरमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, अक्टोबरमा होक्काइडोमा तापमान द्रुत रूपमा घट्छ। र जाडो नजिकै आउँदैछ।
ओटरु शहर, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा पार्कमा खेलिरहेका बच्चाहरू छन्
अक्टोबरको सुरूमा बिहान र साँझको तापक्रम झन्डै at डिग्री सेल्सियस तल झर्छ।
र अक्टोबरको मध्यमा, बिहान र बेलुका तापमान ० डिग्री सेल्सियसमा झर्नेछ।
किनकि अहिलेसम्म चिसो हुने बोटका पातहरू चाँडै रातो र पहेंलो हुन्छन्। सहरहरूमा पनि तपाईं अक्टुबरको मध्यदेखि सुन्दर शरद पातहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, सप्पोरो शहर मा होक्काइडो विश्वविद्यालय क्याम्पस आम जनता को लागी खुला छ। यदि तपाईं सुन्दर रूखको साथ लाइनमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं पक्कै पनि होक्काइडोको शरद enjoyतुमा रमाउन सक्नुहुनेछ।
होक्काइडो युनिभर्सिटी जस्ता सप्पोरो शहरमा रंगीन पातहरूको शिखर अक्टुबरको अन्तदेखि नोभेम्बरको सुरुतिर हो।
यद्यपि पातहरू नोभेम्बरको सुरूवातीमा तितरबितर हुन सक्छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको शहरी क्षेत्रहरूमा खस्ने रंगहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, अक्टोबरको अन्तमा भ्रमण गर्नु उत्तम हुन्छ।
होक्काइडोमा शरद veryतु धेरै छोटो छ। अक्टोबरको अन्तमा, हामी जाडोको चिन्ह महसुस गर्दछौं। तापक्रम बिहान र साँझमा कम छ, र वर्षाको दिनमा दिनमा यो एकदम चिसो छ। यस समयमा यात्रा गर्दा, कृपया तपाईंको जम्पर आदि ल्याउने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
यस अवधिमा पहाडी क्षेत्रहरू जस्तै डाईजेट्सुजान पूर्ण रूपमा जाडोमा हुन्छन्। याद गर्नुहोस् कि टोकियो वा ओसाकाबाट होक्काइडो सम्म यात्रा गर्दा यस क्षेत्रको मौसम बिल्कुलै फरक हुन्छ।
जापान मौसम एजेन्सीले अक्टूबरमा होक्काइडोको मौसम सम्बन्धी तथ्यांकहरू घोषणा गरेको छ। कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस्।
होक्काइडोमा शरद छोटो छ। त्यसपछि लामो जाडो आउँछ। यदि तपाईं होक्काइडोमा शरद पातहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु तपाईं अक्टुबरमा जानुहोस्। सप्पोरो जस्ता सहरी क्षेत्रमा, शरद leavesतुको पातहरूको शिखर मध्य अक्टुबरदेखि अक्टुबरको अन्त्यसम्म हुन्छ। होक्काइडोको मौसमको लागि, म ...
होक्काइडोमा मौसम डाटा (प्रारम्भिक अक्टोबर)
साप्पोरो २.18.5..9.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.6..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.18.0..9.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.4..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.17.2..6.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.0..XNUMX मिमी (-)
Biei २.16.3..4.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.32.7..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.17.2..5.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.8..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.16.0..10.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.43.4..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.16.8..8.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.2..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.16.0..7.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.6..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.16.0..10.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.42.4..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.16.5..7.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.36.5..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.17.9..7.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.6..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.18.9..9.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.9..XNUMX मिमी (-)
अक्टुबर,, २०१:: नाकाजिमा पार्क, सप्पोरो शहर, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकमा पर्यटक नाविक
टोकियो र ओसाका जस्तै, होक्काइडोको मौसम गिरावटमा स्थिर छ। जे होस्, तापक्रम होक्काइडोमा धेरै कम छ।
अक्टुबरको शुरुमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव 5::35। हो, र सूर्यास्त समय करिब १ 17:१० हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5::19। र सूर्यास्त समय १ 16:०53 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा, कृपया नोट गर्नुहोस् कि सूर्यास्त समय टोकियो आदिको भन्दा पहिले हो।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (अक्टोबरको बीच)
साप्पोरो २.16.4..7.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.33.3..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.16.0..7.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.39.0..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.15.2..3.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.8..XNUMX मिमी (-)
Biei २.14.3..2.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.29.8..XNUMX मिमी (-)
फुरानो २.15.2..3.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.28.6..XNUMX मिमी (-)
Wakkanai २.14.0..8.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.38.1..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.15.1..6.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.19.5..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.14.7..6.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.34.4..XNUMX मिमी (-)
नेमुरो २.14.7..8.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.32.5..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.15.0..5.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.28.9..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.15.9..4.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.7..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.17.1..7.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.0..XNUMX मिमी (-)
अक्टुबर १,, २०१18,2018। होक्काइडो युनिभर्सिटी, सप्पोरो, जिन्को एभिन्यू होक्काइडो = शटरस्टक
अक्टोबर अक्टोबरको बीचमा होक्काइडोमा रूखको पात टोकियो, ओसाका, क्योटो आदिको भन्दा करिब एक महिना अघि रंगिन थाल्छ। बिहान र साँझ यो एकदम चिसो हुन्छ।
अक्टुबरको मध्यमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5::47 छ र सूर्यास्त समय १ 16::53 वरपर छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :5::30। र सूर्यास्त समय १ 16:०36 को बारेमा छ।
होक्काइडोमा मौसम डाटा (पछिल्लो अक्टोबर)
साप्पोरो २.13.8..5.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 40.8mm (2 सेमी)
ओटारु २.13.3..5.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 51.0mm (1 सेमी)
Asahikawa २.12.3..2.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 37.5mm (3 सेमी)
Biei २.11.4..1.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 33.1mm (3 सेमी)
फुरानो २.12.2..1.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 32.5mm (1 सेमी)
Wakkanai २.11.5..5.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 52.6mm (1 सेमी)
अबाशिरी २.12.6..4.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.7mm (1 सेमी)
उटोरो २.12.0..4.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 41.4mm (2 सेमी)
नेमुरो २.12.5..6.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.31.4..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.12.9..3.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.29.2..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.13.3..2.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.7..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.14.6..5.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.24.1..XNUMX मिमी (-)
अक्टुबर २,, २०१ H होक्काइडो विश्वविद्यालय गोल्डन-लीफ फेस्टिवल, सप्पोरो, होक्काइडो = शटरस्टक
अक्टुबरको अन्तमा, होक्काइडोको शहरी क्षेत्रमा शरद पातहरू हेर्नको लागि यो उत्तम मौसम हो। एक पूर्ण शरद comingतु आउँदैछ, तर एकै साथ, चिसो जस्तै जाडो दिन पनि बढ्दो छ।
Asahikawa र Biei बाट, तपाईं हिमा सेतो छ कि Dietsuzan को पहाडी क्षेत्र देख्न सक्नुहुन्छ। मैदानमा शरद पात र पहाडमा हिउँको बीचमा भिन्नता धेरै प्रभावशाली छ।
अक्टोबरको अन्तमा सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :5::59 is हो र सूर्यास्त समय १ 16::38 हुन्छ।
होक्काइडोको पूर्वपट्टि अवस्थित नेमुरोमा सूर्योदय समय करिब 5:११ र सूर्यास्त समय १ 43::16 को बारेमा छ।
※ सूर्योदय र सूर्यास्त समयहरू जापानको नेशनल एस्ट्रोनोमिकल वेधशाला द्वारा जारी गरिएको २०१ data डाटामा आधारित छन्। मैले अक्टोबरको शुरुमा for औं समय, अक्टोबर अक्टोबरको लागि १th औं समय र अक्टुबरको अन्तमा २th औं समय पोस्ट गरें।
"अक्टुबर" मा फिर्ता